Electronic Arts တို့တစ်ပတ် 19 XXII ဖီဖာအဖွဲ့ထုတ်ဖော်ပြသ
Electronic Arts တို့အမှတ် XXII မှာအသက် 19 ပတ်ကြာလာမယ့် command ကိုဖီဖာပွဲထုတ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ တနင်္ဂနွေ၏ပွဲစဉ်များရေးစပ်သီဖွဲ့စည်းရန်တစ်ဦးအစဉ်အလာဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ထိပ်-11 လွန်ခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေသာသူရဲကောင်းများဖြစ်ကြသည်ဒါမာတိကာရေးစပ်သီကုံး XXII ရေးအဖွဲ့အချိန်ဖီဖာ 19 ဂိုးသမားဗဟိုနောက်ခံလူလက်ဝဲလက်ယာ Lateral Lateral ဗဟိုကွင်းလယ်လက်ဝဲတောင်ပံကစားသမားညာတောင်ပံကစားသမားရှေ့သို့ခုံတန်းလျားရေးစပ်သီကုံး XXII ရေးအဖွဲ့အချိန်ဖီဖာ 19 developer များ, ချန်ပီယံလိဂ်၏အစည်းအဝေးထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။
NVIDIA နှင့် AMD ၏ (ATI Radeon) မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းလုပ်နည်း
မင်္ဂလာပါ ဗီဒီယိုကဒ်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းမှအများစုကိစ္စများတွင်, ဂိမ်းကစားရောကျလာ: ကောင်းသောအရှိန်လျှင် - ထို FPS (တစ်စက္ကန့်ဘောင်) တိုးပွားစေပါသည်။ ကြောင့်ဒီရန်, ဂိမ်း၏ပုံရိပ်ကပိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်လာ, ဂိမ်းကစားနှေးကွေးမှတာတွေရပ်စဲတစ်ဦးအဆင်ပြေနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်လာသည်။ တခါတရံမှာမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်း 30-35% (:) overclocking ကြိုးစားရန်သိသိသာသာတိုး) ကိုစွမ်းဆောင်ရည်တက်တိုးတက်စေနိုငျပါသညျ!
ကာကွယ်ရေးပြင်သစ်န်ကြီးဌာနအမျိုးမျိုးသောဗီဒီယိုအမျိုးအစားကွန်ပျူတာဂိမ်းများတွင်စိတ်ဝင်စားမှု၏ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော PUBG, LOL, WoW အဖြစ်တိုင်းပြည်၏အဓိကလုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုစီမံကိန်းများကိုကိုယ်စားလှယ်များအဆိုအရ Fortnite နှင့် CS ကစားသမားများအကြားဆက်သွယ်ရေး၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုလေ့လာဘို့စံပြဖြစ်ကြသည်။ အခုဆိုရင်ပြင်သစ်စစ်တပ်အသုံးပြုမှုကိုခေတ်မီတပ်မတော်များအတွက်ကစားသမားများနှင့်အဆင်ပြေအောင်ချတ်နှင့်ကွန်ယက်ဒေတာများအကြားဆက်သွယ်ရေးရဲ့ features တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်သူကကွန်ပျူတာဂိမ်းစျေးကွက်ကိုလေ့လာကြောင်း, ရာထူးထရိန်နင်အဘို့အပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုရှာဖွေနေနေကြသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 ခုနှစ်တွင်တင့်ကား Tank ၏ကမ္ဘာ့ဖလားအပေါ်လျှော့စျေး: စစ်တိုက်ခြင်းငှါ,
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ, ရဲဘော်ရဲဘက်ရေနံတင်သင်္ဘော! ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 ခုနှစ်တွင်အထူးလျှော့စျေးလျှောက်ထားတံ့သောင့်ကားများခွဲခြားသတ်မှတ် Wargaming ကသူ၏အွန်လိုင်းကုမ္ပဏီတွင်ရေပန်းစားမဲဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါစစ်တမ်းကိုယူနစ်လ၏ပထမနှင့်ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်တစ်ဦးလျှော့စျေးခံယူသောတိုက်ခိုက်ရေးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းသို့ခွဲခြားထားတယ်။ တိုင်းမဲတထောင် 15 ကျော်ကလူတက်ရောက်ခဲ့သည်။
အကောင်းဆုံးကို Indie ဂိမ်းများကို 2018 ဆယ်
အင်ဒီစီမံကိန်းတွေမကြာခဏအေးမရဂရပ်ဖစ်, အထူးသက်ရောက်မှု Blockbuster အဆင့်နှင့် Multi-ဒေါ်လာသန်းဘတ်ဂျက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ရဲရင့်အတွေးအခေါ်များ, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်, ထူးခြားတဲ့စတိုင်နှင့်ဂိမ်း၏ထူးခြားသောဂိမ်းပရိယာယ်အံ့သြဖို့ကြိုးစားပါ။ လွတ်လပ်သောစတူဒီယိုသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းဆော့ဖ်ဝဲရေးသူထံမှဂိမ်းများကိုမကြာခဏကစားသမားများနှင့်အံ့သြစရာပင်အများဆုံးခေတ်မီဂိမ်းကစားများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်။
PC ကို 2018 ရက်တွင်ထိပ်တန်း 10 ဦးကိုအကောင်းဆုံးဂိမ်း
အကောင်းဆုံးဂိမ်း 2018 အတွက် PC မှာ install လုပ်ဖို့ထုတ်လုပ်နေကြတယ်, လူကြိုက်အများဆုံးများ၏စာရင်းထဲသို့ဝင်နှင့်အပြီးရှာကြံလျက်နေ၏။ အထင်ကရ developer များအနေဖြင့်အားလုံးလက်ရှိဂိမ်းပလက်ဖောင်းအသစ်ထုတ်ကုန်များထွန်းနှင့်အတူဖြည့်ဆည်းစစ်မြေပြင်က-2 သို့မဟုတ် Wolfenstein-2 အပါအဝင်မျှော်လင့်ထားသည့်အဓိကဂိမ်း, Exit ။ 2018 အတွက်ကို PC ပေါ်မှာမာတိကာထိပ်တန်းဂိမ်း: ထိပ်ဆုံး 10 Crossout PlayerUnknown ရဲ့ပွို (PUBG) ဒမ်း 2018 ခုနှစ်လှတျမွောကျ Far Cry5Icarus အွန်လိုင်းငလျင်ကြောင့်ချန်ပီယံလိဂ် Darksiders III ကိုထပ်မံကျ 76 ကိုအရေးယူမှာ PC ပေါ်မှာ3Vampyr အကောင်းဆုံးဂိမ်း Come: 2018 အတွက်ထိပ်တန်း 10 ဦးထိပ်ဂိမ်းများကိုကွဲပြားခြားနား၏အရှိဆုံးဒီကဗျာကိုယ်စားလှယ်များအကြားရှိပါတယ် ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဝေဖန်သူအများအပြားကများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏အမြင်နှင့်အညီထိပ်အဆင့်ကစားသမားများသိမ်းပိုက်ကြောင်းအမျိုးအစားများ။
ဒီဇင်ဘာလ 2018 ၏အများဆုံးမျှော်လင့်ဂိမ်းဆယ်ပါး
ဒီဇင်ဘာလ 2018 ခုနှစ်အများဆုံးမျှော်လင့်ဂိမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပေမယ့်လည်းအကောင်းကိုအသုံးပြုခြင်းမှသာအချိန်ဖြုန်းဖို့ကို enable ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, မွို့၌ရှင်သန်မှုသင်ခန်းစာများ, လိမ့်မည်တုံ့ပြန်မှုများ၏မြန်နှုန်းတိုးတက်စေလျှင်, အပြင်, ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ချိန်က 20 ကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများမှာမြင်ကွင်းများကိုမြင်ကိုကူညီပေးပါတယ်။ ဧဒင်ဥယျာဉ်လက်နက်ကိုင်ဖို့လမ်းမကြီး: ဒီဇင်ဘာလ 2018 Mutant တစ်နှစ်တာသုည၏ထိပ်တန်း 10 ဦးအများဆုံးမျှော်လင့်ဂိမ်းမာတိကာသဲမုန်တိုင်းရုံထာဝရထွတ်များမဟာမိတ်အဖွဲ့4ဘွမ် Simulator ခရီးသွားဘတ်စ်ကား Simulator နိပွန်မာရသွန် DYSTOA Edge စေ: ဒေါသ!
ယခုတိုင်အောင်ကစားကြသည်အဟောင်းတွေကို PC ဂိမ်း: အပိုင်း 3
ကျွန်ုပ်တို့၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအားကစားပြိုင်ပွဲရုံဖျော်ဖြေရေးထက်ပိုတစ်ခုခုဖြစ်လာကြပါပြီ။ အဲဒီစီမံကိန်းတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးအချိန်လေး relive လိုသူကိုမယုံနိုင်စရာစိတ်ခံစားမှုဂိမ်းကစားပေးမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာအစဉ်အမြဲဆက်လက်တည်ရှိသူတို့ကိုမှပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ ယခင်ဆောင်းပါးတွေမှာကျွန်တော်ယခုတိုင်အောင်ကစားကြသည်ဟောင်းဂိမ်းအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။
Project မှ CARS ၏တတိယအစိတ်အပိုင်းကိုမြန်နှုန်း Shift များအတွက်လိုအပ်ဆင်တူဖြစ်လိမ့်မည်
Developer များသုံးစုတစု autosimulator စီမံကိန်း CARS လာမည့်စီမံကိန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမျှဝေပေးတယ်။ အနည်းငယ်ရူးသွပ် Studios က, မှ Ian ဘဲလ်၏ဦးခေါင်းကနေဖော်ပြထားသကဲ့သို့, ဆက်လက်တဲ့အကြိုက်ဆုံး၏များစွာသောဂိမ်းကစားစီးရီးအားနည်းချက်ကို Arcade အစိတ်အပိုင်း geypleya ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ယူပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဂိမ်းစီမံကိန်း CARS ပြီးသားကို EA ကနေစတူဒီယိုကနေဒါမှကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောမြန်နှုန်း Shift, များအတွက်ကျော်ကြားသောလိုအပ်နေသောူပည်သူသတိပေး3တစ်ခုခု, အများစုမှာဖွယ်ရှိ။
သငျသညျယခုကွန်ပျူတာပေါ်မှာကစားနိုင်မထိပ်တန်း 20 NES ဂိမ်း
အခုတော့ Dendi console ကိုအလွန်ရှားပါးသည်နှင့်နီးပါးဖျော်ဖြေရေးတစ်ခုနည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုမ။ မှတ်ဉာဏ်အတွက်သာဒဏ္ဍာရီဗီဒီယိုဂိမ်းစီးရီး, တဖနျထိုးချင်ရာ၏ကြံစည်မှုရှိခဲ့သည်။ ဤအရည်ရွယ်ချက်များအဘို့, PC ကို emulator အထူးဂိမ်း dandy ထောက်ခံပါတယ်သောဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ သူတို့ထဲက top-20 မျိုးဆက် Dendi အတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းလူငယ်များကြားတွင်သာလူကြိုက်များကြသည်။
တစ်ပတ် 19 XXI ဖီဖာအဖွဲ့: ၎င်း၏အနေအထားကိုတိုးတက်လျက်ရှိသည်ကိုအဘယ်သူ
Electronic Arts တို့ထံမှ developer များဖီဖာ 19 XXI အပတ်ကအသစ်တခုအသင်းကြေညာခဲ့သည်။ ဤအချိန်တွင်ဖွဲ့စည်းမှုတိုက်ခိုက်ရေးအရင်ကဲ့သို့ဘယ်တော့မှထွက်လှည့်။ မာတိကာဖီဖာ 19 အသင်းများထိပ်တန်းကစားသမား XXI ဂိုးသမားဗဟိုနောက်ခံလူလက်ဝဲလက်ယာ Lateral Lateral ဗဟိုအလယ်တန်းရှေ့သို့ခုံတန်းလျားထိပ်တန်းကစားသမား XXI အသင်းဖီဖာ 19 ဂိမ်းကစားပြီးသားတိုးတက်ကဒ်ကစားသမားများအတွက်အမဲလိုက်ခြင်းဆန္ဒပြပြီတကား
အဟောင်းကျောင်းကို၏ဝိညာဉ်: အကို PC ပေါ်မှာဟောင်းနွမ်းဂိမ်းရဲ့အကောင်းဆုံးဇာတ်ကား 10
နှစ်ပေါင်းများစွာသာပိုကောင်းဖြစ်လာ - စပျစ်ရည်ကဲ့သို့အခြို့သောဂိမ်းများကို။ သို့သော်တိုးတက်မှုနေဆဲမခံမရပ်ပါဘူး, ဤစီမံကိန်းများတွင်ဂရပ်ဖစ်အသုံးမပြုတော့တဲ့အဖြစ် mechanics ရဲ့, ရူပဗေဒနှင့်အခြားသော့ချက်ဂိမ်းဒြပ်စင်။ အတိတ်၏ဤလက်ရာဇာတ်ကားကိုသတိမပြုမိ developer များမတည်မနေပါဘူး။
Xbox ဆန့်ကျင်သည် PS: game consoles စနှိုငျးယှဉျ
Xbox ဂိမ်းစက်သို့မဟုတ် PS အကြားရွေးချယ်မှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည် console ကိုဂိမ်းများကိုလောကီသားတို့သည်အဖို့အသစ်ရောက်ရှိလာသော။ အညီအမျှ untwisted နှစ်ပါးကုန်အမှတ်တံဆိပ်, တူညီတဲ့စျေးနှုန်းအကွာအဝေး၌ရှိကြ၏။ အသုံးပြုသူများထံမှတုံ့ပြန်ချက်ကိုလည်းများသောအားဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရုပ်ပုံကိုမပေးပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အနှစျခု consoles စနှိုင်းယှဉ်တစ် table ၏ပုံစံအတွက်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေ့လာသင်ယူရန်လွယ်ကူသည်။ 2018 များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ် Presents ။
က PS4 2018 ရက်နေ့တွင်5ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဂိမ်း
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအဆိုပါအီလက်ထရောနစ်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းကလွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်၏သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ကိုမွငျလြှငျအဘယျသို့နီးကပ်လာလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ PC နဲ့ consoles စများအတွက်အားကစားပြိုင်ပွဲသူတို့ရဲ့ဂရပ်ဖစ်, ကြံစည်မှုရွေ့လျားနှင့်အခြားဒြပ်စင်များနှင့်အတူအထင်ကြီး။ ခြော, PS4 - ကထိပ်တန်းအဆင့် consoles စထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်, 2018 ထဲမှာအဘို့များစွာသောဂိမ်းရှိခဲ့သည်။
သည် PS 2018 အတွက်ထိပ်တန်း 10 ဦးကိုအကောင်းဆုံးဂိမ်း
2018 ခုနှစ်သည် PS များအတွက်ထိပ်တန်း 10 ဦးကိုအကောင်းဆုံးဂိမ်းသူ့ဟာသူအဘို့ပြောသော: တကျိပ်နှစ်ပါးလအတွင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်တောက်ပ Premiere အတွက်ရတတ်၏။ သည်, တောရိုင်းအနောက်၏ Cowboys ခံစားရဖို့ဂျပန်မာဖီးယားဂိုဏ်းဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရေးသမားအလယ်ခေတ်များ၏နိုက်နှင့်ပင် Spider-Man: သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဂိမ်းကစားအချိန်ထဲကနေအချိန်နှင့်တိုင်းပြည်သွားရောက်နိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါမှတ်စုစာအုပ် Processor ကိုမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းလုပ်နည်း
မင်္ဂလာပါ အသုံးပြုသူပိုမိုမြန်ဆန်သည်မိမိ Laptop ကိုပြေးအဘယျသို့မလိုချင်ပါသလဲ? မရှိပါ! နှင့်အရှိန်ဆောင်ပုဒ်ပါလိမ့်မယ်အစဉ်အမြဲသက်ဆိုင်ရာ ... Processor ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ - ဆိုကွန်ပျူတာ၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းများထဲမှတစ်ခု, သိသိသာသာကိရိယာ၏မြန်နှုန်းသက်ရောက်သည်။ မိမိအ acceleration ကိုတစ်ခါတစ်ရံအတော်လေးသိသိသာသာ, laptop ကိုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မယ်။
AliExpress က c 10 အကောင်းဆုံးဂိမ်းကီးဘုတ်
မဆို avid ဂိမ်းဘယ်လိုမသက်မသာနှင့်ခဏတာကီးဘုတ်အဖြစ် "ရုံး" သိတယ်နှင့်တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာတစ်လျောက်ပတ်သောဂိမ်းပုံစံကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်။ ဖြေရှင်းချက်တရုတ်ထံမှတိုက်ရိုက် devaysa ဝယ်ယူရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဤတွင် Aliekspress နှင့်အတူအကောင်းဆုံးဂိမ်းလက်ကွက်များစာရင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။ မာတိကာ 10. Oklick 760G - 1000 ရူဘယ်9။
နေ့သည်ကောင်းသော။ (အရမ်းနှင့်မပရိတ်သတ်တွေ, ကျနော်ထင်ပါတယ်) အားလုံးဂိမ်းကစားသည့်ပြေးဂိမ်းနှေးကွေးလာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှငျ့ရငျဆိုငျ: အရုပ်ပုံ twitching, မျက်နှာပြင်လူရှုပ်အပေါ်ပြောင်းလဲ, တခါတရံတွင်သူကကွန်ပျူတာ Hang (ကဝက်ဒုတိယ, ဒုတိယ) ထိုပုံရသည်။ အလားတူထိုကဲ့သို့သောနှေးတဲ့ "တရားခံ" (-: သုံးနေပြီ, သုံးနေပြီအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ထားသောသုံးနေပြီ) တည်ထောင်ရန်အမြဲမလွယ်ကူပါဘူးအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျဝင်ငွေနိုင်မည့်ထိပ်တန်း 20 အွန်လိုင်းဂိမ်းများ,
အွန်လိုင်းဂိမ်းမှာတော့ကလေးများနှင့်လူကြီးများနှစ်ဦးစလုံးကစားရန်ကြိုက်နှစ်သက်ပေမယ့်လူတိုင်းမမသာကြီးမြတ် pastime, ဒါပေမယ့်လည်းကောင်းတစ်ဦးအပိုဆောင်းဝင်ငွေဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုသိတော်မူ၏။ အဓိကအရာ - သင်သာအကို virtual လောကသို့ထိုးခြင်းနှင့်နှစ်ဆအပျော်အပါးရဖို့ရှိလိမ့်မည်သည့်ပြီးနောက်လူကြိုက်များငွေပေးချေမှုစနစ်များမှတဆင့်စစ်မှန်သောနှင့် output ကိုသူတို့အဘို့အရရှိခဲ့ပြီးငွေကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြုမယ့်စီမံကိန်းကိုရွေးချယ်ဖို့။
ဇန်နဝါရီလ 2019 ခုနှစ်အခမဲ့ PS Plus အားစာရင်းသွင်းသူဂိမ်းများ, နှင့် Xbox Live ရွှေတစ်ရွေးချယ်ရေး
PS Plus အားနှင့် Xbox Live ရွှေဆက်လက် subscriber များအားလူကြိုက်များန်ဆောင်မှုများအတွက်လစဉ် giveaway ။ ဇန်နဝါရီလ 2019 ခုနှစ်တွင် consoles စများ၏ဦးဆောင်အသုံးပြုသူများကသူတို့တစ်ပြားမှပေးဆောင်ခြင်းမပြု၎င်း၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာဂိမ်းအသစ်ရပါလိမ့်မယ်။ PlayStation Plus အား subscriber များအားတစ်ကြိမ်မှာခြောက်လစီမံကိန်းများကိုဆည်းပူးမည်အကြောင်း, Xbox Live ရွှေသာလေးအသုံးပြုသူများကိုငါပေးမည်။